Dzidzisa + Mhepo: Air France inosimbisa kuzvipira kugadziriro yezvakatipoteredza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Dzidzisa + Mhepo: Air France inosimbisa kuzvipira kugadziriro yezvakatipoteredza
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Rail Kufamba • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo vatakuri vari kuramba vachida dzimwe nzira dzekushanya dzakatipoteredza, Air France iri kuchengetedza mari yaro yemberi nekumisikidza mhinduro dzine musoro.
Air France inowedzera chirongwa chayo 'Chitima + Mhepo'.
Kuwedzera kweAir France kunoratidzira nhanho dzakakomba dzinotorwa nemutakuri kudzikisa kabhoni.
Air France yakazvipira kudzikisa emhepo yekuburitsa emhepo ne50% na2025 kubva pamazinga e2019.
Kuwedzera kwechangobva kuitika kwe Air France'S' Chitima + Mhepo 'chirongwa chinoratidzira kuzvipira kwayo kwakasimba mukuchengetedza kwezvakatipoteredza. Sezvo vatakuri vari kuramba vachida dzimwe nzira dzekufambisa dzakanaka, nendege iri kuchengetedza mari yaro yemberi nekumisikidza mhinduro dzine musoro.
Kunyangwe isiri chirongwa chitsva, kuwedzera kweAir France kunoratidza nhanho dzakakomba dziri kutorwa nemutakuri kudzikisa kabhoni. Air France yakazvipira kudzikisa emhepo yekuburitsa emhepo ne50% na2025 kubva muna2019 mazinga uye aya matanho akakosha kuti uwane izvi. Mimwe migwagwa minomwe yakawedzerwa uye gumi neshanu dzave kushomeka. Ichipa tikiti rimwe chete, mapoinzi ekuvimbika, uye dziviriro yekubatanidza, ndege yendege yagadzira chirongwa chinogarisana nharaunda chakanyanya kukwezva kune vafambi, uku ichigadzira oparesheni yepakati pekufambisa inokodzera ramangwana.
Vafambi vari kuwedzera mukana wekufurirwa neyakagadzikana nharaunda chigadzirwa kana sevhisi. Maindasitiri eQ1 2021 Ongororo yeVatengi yakaratidza kuti 76% yevakabvunzwa pasi rese vanogara ',' kazhinji ', kana' dzimwe nguva 'vanokurudzirwa nechinhu ichi, vachikwira kusvika ku78% pakati pevakabvunzwa neFrance.
Air France yaona mukana wakawedzera wekuti vafambi vachachinjira kune dzimwe nzira dzekufambisa dzakanaka munzira dzakapfupika, kunyanya njanji, zvichipiwa kuti kufamba kunonyadzisa kwendege kwawedzera simba muEurope. Iyi indasitiri-inotungamira zano ichabhadhara mibairo mukudzivirira mutakuri mufananidzo wechiratidzo kwemakore anouya, nepo ichideredza basa rayo rekubhururuka.
Mazhinji enzira dzemutakuri refu dzinotenderera pane zvekudya zvekumba kubva kunhandare dzenharaunda, uye chirongwa ichi chinoona kuti hachirasikirwe nevatakuri vanodiwa zvakanyanya. Nekuita zvinoshanda mumusoro wenyaya yekusimudzira, anotakura achamisa huvepo hwakasimba mune ino maitiro pamberi pevakwikwidzi uye anogona kuve wepakati pekufambisa mutyairi wesarudzo mukati meFrance.
Kufamba kwenjanji kwaive kwechipiri kwakakurumbira sarudzo yekufambisa, kuseri kwemugwagwa, yenzendo dzekumba mukati meFrance mu2019 yakashandiswa kwe17.4% (29.3 mamirioni) yenzendo. Zvinofungidzirwa kuti ne2025 njanji ichaverengera 18% yenzendo dzekumba, inokwana 31.4 miriyoni nzendo.
Kufamba kwechitima kwawana mukurumbira munguva pfupi yapfuura, uye ine yakakura-inomhanyisa netiweki kuyambuka France, yakagadzirirwa kuve inonyanya kufarirwa. Nemusika mupfupi wekutakura ungangotora chakanyanya kurohwa mumakore anotevera, kunyanya neHurumende yeFrance ichimisa kurambidzwa kune dzimwe nzira dzepamba, zano rehungwaru iri richaona kuti Air France inoonekwa semutungamiri wezvekufambisa wepakati. Kuwedzera kwechirongwa cheAir France 'Air + Rail' kunosimbisa nhanho dzakakomba dziri kutorwa nendege kuti ive nharaunda, nepo ichitendera kambani kuti ionekwe sechinhu chinofambira mberi chine hanya nekusimba.